Anyaukwu Kpataara Gehezaị Nsogbu
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ndebele Niuean Norwegian Ossetian Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tetun Dili Thai Tigrinya Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Ò NWETỤLA mgbe ị chọrọ inweta otu ihe dị gị ezigbo mkpa?— * Ọtụtụ ndị na-achọkwa inweta ihe dị ha ezigbo mkpa. Ma ì kwesịrị ịgha ụgha ka i nwee ike inweta ihe dị gị mkpa?— Mba, i kwesịghị. Onye ọ bụla nke mere otú ahụ bụ onye anyaukwu. Ka anyị hụ otú otu nwoke aha ya bụ Gehezaị si kpatara onwe ya nsogbu n’ihi anyaukwu. Gehezaị bụ onye na-ejere Ịlaịsha ozi. Ịlaịsha bụkwanụ onye amụma nke ezi Chineke bụ́ Jehova.
Ịlaịsha na Gehezaị dịrị ndụ n’oge ochie. Ha dịrị ndụ otu puku afọ tupu a mụọ Ọkpara Chineke, bụ́ Jizọs, n’ụwa. Jehova si n’aka Ịlaịsha rụọ ọtụtụ ọrụ ebube. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kọrọ na e nwere otu nwoke a ma ama bụ́ onyeisi ndị agha Siria. Ma, nwoke ahụ bụ onye ekpenta. Aha ya bụ Neaman. O nweghị onye gwọliri nwoke ahụ. Ma, Ịlaịsha mechara gwọọ ya.
Mgbe ọ bụla Chineke si n’aka Ịlaịsha gwọọ ndị mmadụ ọrịa, Ịlaịsha anaghị ana ha ego. Ị̀ ma ihe kpatara ya?— Ọ bụ maka na Ịlaịsha ma na ọ bụ Jehova na-arụ ọrụ ebube ndị ahụ, ọ bụghị yanwa. Mgbe a gwọrọ Neaman, obi tọrọ ya ezigbo ụtọ nke na o nyere Ịlaịsha onyinye ndị dị ka ọlaedo, ọlaọcha, na uwe ndị mara mma. Ịlaịsha anaraghị ya ihe ọ bụla, ma Gehezaị chọsiri onyinye ndị ahụ ike.
Mgbe Neaman lawara, Gehezaị chụụrụ ya gawa. Ma Gehezaị agwaghị Ịlaịsha ebe ọ na-aga. Mgbe Gehezaị chụkwutere Neaman, ị̀ ma ihe ọ gwara Neaman?— Ọ gwara ya, sị: ‘Ịlaịsha zitere m ka m gwa gị na ụmụ okorobịa abụọ bịara n’ụlọ ya ugbu a ugbu a. Ọ chọrọ ka i nye ya uwe mgbanwe abụọ ka o nye ha.’
Ma ihe ahụ Gehezaị kwuru bụ ụgha! O nweghị ndị bịara n’ụlọ Ịlaịsha. Ihe mere o ji kwuo ya bụ ka o nwee ike ịnata Neaman uwe ndị ahụ Neaman nyere Ịlaịsha, Ịlaịsha ajụ ịnara. Neaman amakwanụghị na ọ bụ ụgha ka Gehezaị na-aghara ya, ya ewere obi ụtọ nye Gehezaị uwe ndị ahụ. Neaman nyekwara Gehezaị ihe ndị ọzọ Gehezaị na-agwaghị ya ka o nye ya. Ị̀ ma ihe mechara mee?—
Mgbe Gehezaị lọtara, Ịlaịsha jụrụ ya, sị: ‘Olee ebe ị nọ kemgbe?’
Gehezaị zara ya: ‘Anọ m ya. O nweghị ebe m gara.’ Ma Jehova emeela ka Ịlaịsha mata ihe niile Gehezaị mere. Ọ bụ ya mere Ịlaịsha ji gwa Gehezaị, sị: ‘Ugbu a abụghị oge ịnara ego na uwe.’
Gehezaị anarala ego na uwe na-abụghị nke ya. Nke a mere ka Chineke mee ka ekpenta ahụ Neaman na-arịa rịawazie Gehezaị. Gịnị ka i chere anyị nwere ike ịmụta n’ihe a mere Gehezaị?— Otu ihe ọ na-akụziri anyị bụ na anyị ekwesịghị ịgha ụgha ma ọ bụ ịkọ akụkọ na-abụghị eziokwu.
Gịnị mere Gehezaị ji ghaa ụgha?— Ọ bụ n’ihi na ọ bụ onye anyaukwu. Ọ chọrọ inweta ihe na-abụghị nke ya, ọ ghakwara ụgha ka o nweta ya. Nke a mere ka ọ bụrụzie onye ekpenta ná ndụ ya niile.
Ma e nwere nsogbu ka njọ ihe ahụ kpataara Gehezaị. Ị̀ ma nsogbu ọ bụ?— Ya na Chineke kwụsịrị ịdị ná mma, Chineke ahụghịzi ya n’anya. Anyị ekwesịghị ime ihe ọ bụla ga-eme ka anyị na Chineke kwụsị ịdị ná mma, ya agharazie ịhụ anyị n’anya. Kama nke ahụ, anyị kwesịrị ịna-emere ndị ọzọ ihe ọma.
Gụọ ebe ndị a na Baịbụl gị
2 Ndị Eze 5:5, 20-27; Jud 21
^ par. 3 Ọ bụrụ nwatakịrị ka ị na-agụrụ akụkọ a, akara ùhiè ndị dị n’isiokwu a na-echetara gị ka ị kwụsịtụ gbaa ya ume ka ọ zaa ajụjụ ndị ahụ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Anyaukwu Kpataara Gehezaị Nsogbu